Waxaan kuu sheegayaa shaqada dharka baleedka - Warka - Shenzhen Wudongfang Dhaqanka Isgaarsiinta Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Wararka shirkadda > Waxaan kuu sheegayaa shaqada dharka baleyda
Waxaan kuu sheegayaa shaqada dharka baleyda
Hadday tahay fasalka tababarka ama masraxa, qoob-ka-ciyaarayaashu waxay si gaar ah u xirtaan loogu talagalayDharka baleedka. Although some Dharka baleedka may change styles with fashion, for dancers, practice clothes are not just for good looks, and each of them has its practical role.
Xiisadaha iyo ciriiriga ayaa ah dharka jimicsiga aasaasiga ah ee qoob-ka-ciyaarka. Goobta balastiga caadiga ah, gabdhuhu waxay inta badan xirtaan dhar adag oo midabkoodu casaan yahay. Iskuulada qaar waxay jecelyihiin inay u ogolaadaan gabdhahooda inay xirtaan sharaabaadyo iyo noocyo midabyo kala duwan leh. Dharka baletka mararka qaarkood waxay leeyihiin goon gaaban oo ka samaysan waxyaabo aad u dhuuban oo ka baxsan meelaha adag. Wiilasha guud ahaan waxay xirtaan funaanado gacmo gaab ah oo gacmo gaab ah oo madow leh.
Bilowga tababbarka, "lugaha" ayaa ka caawin kara qoob-ka-cayaaraha inay si dhakhso leh u gaaraan ujeeddada kuleylka. Marka murqaha ay kululaadaan, waa in laga qaadaa. Jidhka lagu xiro dhogorta ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu celceliyo qoob-ka-cayaaraha si ay u sugaan ciyaarta ama beddelaadda.
Qaabka timaha sidoo kale waa qeyb ka mid ah dharka qoob ka ciyaarka. Gabdhaha baleedka caadiga ah waxay jecel yihiin inay timahooda nus-dhererka ah madaxa ka saaraan, si khadadka qoorta iyo madaxu u noqdaan kuwo aad u cad.
Kabaha jilicsan ee baletku waa kabo ay xidhaan gabdhaha iyo wiilashu ka hor intaanay gabdhuhu ku dhaqmin suulasha. Waxay ka samaysan yihiin maqaar jilicsan oo jilicsan ama shiraac. Gabdhaha waxay xirtaan casaan halka wiilasha ay xirtaan madow ama cadaan. Kabaha waa in si adag loogu duubaa cagaha. Kabaha suulasha leh madax adag, waa inay noqdaan kuwo aad u habboon. Xariggu waa inuu ku dhejiyaa kabaha qoob-ka-ciyaare kasta qaabkiisa u gaarka ah. Ka dib marka aad kabaha gashato, xargaha ayaa saddex jeer cagta la mariyey, madaxa waa in si nadiif ah loogu xidhaa. Qoob-ka-ciyaarayaal badan ayaa sidoo kale dharbaaxaya kabaha si satinka kabaha pointe uusan uga ifin nalalka masraxa.
Waxaa la aasaasay 1999ï¼ŒWudongfang Dhaqanka Gudbinta Co., Ltd. oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo iibinta dharka qoob ka ciyaarka, sumcad sarena ku leh warshadaha juear qoob ka ciyaarka Shiinaha. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah tuute-baleedka, goonnada baleedka, leotard qoob-ka-ciyaarka iyo dhar kale. Iyo kabaha baleedka, kabaha baleedka iyo qalab kale.
Hore:Balet TUTU goonnada ayaa tusi kara dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka
Xiga:Gundhig iyo goobtii baarka Lake Swan